Ukulungiselela Iifoto Zakho KwiWebhu: Iingcebiso Nobuchule | Martech Zone
Ukulungiselela Iifoto Zakho KwiWebhu: Iingcebiso kunye neTekhnoloji
NgoLwesithathu, nge-20 kaJanuwari 2010 NgoLwesine, Meyi 14, 2015 Umthetho oyilwayo wesiNgesi
Ukuba ubhalela ibhlog, lawula iwebhusayithi, okanye uthumele izicelo zenethiwekhi ezinje nge-Facebook okanye i-Twitter, ukufota kusenokwenzeka ukuba kudlala indima ebalulekileyo kumjelo womxholo wakho. Into ongayaziyo kukuba akukho mali ye-stellar typography okanye uyilo olubonakalayo olunokwenza ukufota okufudumeleyo. Kwelinye icala, ukufota okubukhali nokucacileyo kuya kubaphucula abasebenzisi? imbono yomxholo wakho kunye nokuphucula ukujonga ngokubanzi kunye nokuziva kwesiza sakho okanye ibhlog.
At Ilungele Sichitha ixesha elininzi silungiselela ukufota abanye abantu kwiwebhu, ke nazi izikhombisi ezikhawulezayo esizithathileyo endleleni.
Nceda uqaphele: le miyalelo yobugcisa ingezantsi ibhekisa kwiAdobe Photoshop CS4. Kukho ezinye iinkqubo ezinokuthi zisebenze ngokufanayo, ke ukuba awukwazi ukufikelela kwi-Photoshop nceda ujonge uxwebhu loncedo lwenkqubo yakho yokuhlela umfanekiso ukuze ubone ukuba ungazenza na ezi ndlela.
Amaxesha amaninzi ukulungiselela ifoto kwiwebhusayithi yakho okanye kwibhlog kufuna ukuba uyenze incinci, ngakumbi ukuba ivela kwikhamera yedijithali ye-megapixel. Kubalulekile ukwazi ukuba ukunciphisa ubungakanani kuthetha ukunciphisa iinkcukacha, njengoko i-Photoshop is mushing? kunye neepikseli ezingabamelwane ukuze ulingane umfanekiso kubukhulu bayo obutsha; oku kunika ifoto imbonakalo engacacanga.
Ukuze ubuxoki? inkcukacha olahlekileyo kufuneka uzisebenzise Unsharp Mask filter (Icebo lokucoca ulwelo> Unsharp Mask). Ungaze ucinge ngegama elinomdla-i-Unsharp Mask ilola ngokwenene!
Ungaqaphela ukuba zicace kangakanani kwaye zichaze iinkcukacha ezikuzo Umzobo 2 ngezantsi.
Ulawulo kwi-Unsharp Mask ibhokisi yencoko yababini inokubonakala inzima, kodwa iindaba ezimnandi ekulungiseleleni iifoto zewebhu awuzukuphambuka ngazo kakhulu. Ndifumana isixa se-50%, iRadius ye .5, kunye noMqobo we-0 usebenza phantse lonke ixesha.
Imifanekiso yezityalo ngokoMxholo
Kwezinye iimeko, unokufuna ukwenza uluhlu lwezithonjana ezinxibelelana nohlobo olukhulu lomfanekiso. Iziganeko eziqhelekileyo zoku kuba yimifanekiso yeefoto okanye iindaba eziphambili ezinephepha lesithombiso somfanekiso omkhulu.
Xa unciphisa umfanekiso kubungakanani be-thumbnail, zama ukutyala umfanekiso kwizinto zawo ngaphambi kokuphinda wenze ubungakanani kwakhona. Oku kuvumela abasebenzisi ukuba baqonde umxholo kunye nentsingiselo yomfanekiso nakubukhulu obuncinci.
Umzobo 1 ngumfanekiso othe ngqo walinganiswa ngokuthe ngqo kubungakanani bezithonjana, kodwa Umzobo 2 iye yahluthwa kwizinto ezibalulekileyo zesithombe. Oku kuvumela abasebenzisi ukuba baqonde ngokukhawuleza ukuba yintoni umfanekiso ozama ukunxibelelana kwaye ubakhuthaza ukuba bacofe ulwazi oluthe kratya.
Vibrance kunye noMgqibelo
Ukugcwala komfanekiso kukuqina kombala. Kwimifanekiso engafakwanga kakhulu, iithoni zolusu zikhangeleka zigula kwaye isibhakabhaka sikhangeleka singwevu kwaye simfiliba. Ukongeza ubomi kwimifanekiso yakho, i-Photoshop CS4 inecebo lokucoca ulwelo endilucebisayo elibizwa ngokuba yiVibrance.
Ukuba ufuna ukuzisa ngokukhawuleza ubomi kwifoto yakho engacacanga zama ezi zinto zilandelayo:
Yongeza umaleko omtsha wohlengahlengiso (uLaleko> uLungelelwaniso olutsha loLungiso> Vibrance)
Ukonyusa isilayidi sokuqaqamba (Umzobo 2Ngaphakathi kwiphaneli yohlengahlengiso iya kuqinisa umbala ngelixa ikhusela iithoni zolusu (ukubathintela ekujongeni iorenji). Isilayidi sokugcwalisa siza kuba nefuthe elifanayo, kodwa siya kuwutshintsha wonke umfanekiso, kubandakanya neetoni zolusu.
Ezi ngcebiso ziphela nje kwincam yomkhenkce ngokubhekisele kwizityebi kunye neempawu ezinamandla ze-Photoshop zokubonelela ngokulungisa nokwandisa ukufota. Nceda unike inqaku kumagqabantshintshi ukuba zikhona ezinye iindlela ongathanda ukuzibona zichazwa.
tags: I-adobe photoshop cs4isityaloimifanekiso yezityaloisihluzoumfanekisoisivuno somfanekisoukulungiswa komfanekisophotoUkufotowaPhotoshopIfoto yefoto cs4imask engenasipheloisihluzi se-mask esingagungqiyoukungcangcazelamaleko lokungcangcazela
Umthetho oyilwayo wesiNgesi
UMthetho oYilwayo (@iqosweb) yintloko yoyilo e Ilungele kwaye ebesenza ubugcisa kwiikhompyuter ukusukela ngeentsuku ze-Amiga 500. I-Intanethi kunye nesikhangeli sewebhu samvumela ukuba ekugqibeleni adibanise umdla wobomi kuyilo lwegraphic kunye nobugcisa obulandelelanayo ngokuthanda kwakhe itekhnoloji kunye neenkqubo. Izinto ezithandwa nguBill zibandakanya iiMarvel comics, iGuitar Hero, kunye nokubukela iipodcast malunga neemovie. Uninzi lweeseshoni zakhe zoyilo zixhaswe sisixa esikhulu seDiet Coke. Ngoku uhlala eWestfield, IN, kunye nenkosikazi yakhe emangalisayo, uNicole, kunye nonyana omangalisayo ngokulinganayo, uVan.
Bathengisi beTech abathandekayo: Yeka Iimpawu zokuThengisa ngaphezulu kweziBonelelo